Dalxiiska Seychelles oo soo bandhigay qorshaha soo kabashada Dalxiiska 2021 | Seychelles wararka safarka
Arimaha Dowlada • Warka Warshadaha Martigelinta • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • dib u dhiska safarka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • News Trending
Dalxiiska Seychelles ayaa soo bandhigay qorshaha soo kabashada Dalxiiska 2021
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Dalxiiska Seychelles ayaa soo bandhigay qorshaha soo kabashada Dalxiiska 2021
Warshadaha Dalxiiska ee Seychelles waxay muujinayaan wadada horay loogu socdo sanadka 2021 inta lagu gudajiro Shirka Istiraatiijiyadda Suuqgeynta Sannadlaha ee Golaha Dalxiiska Seychelles (STB).
Loogu magac daray "Wadada Soo-kabashada," kulan istiraatiijiyadeed ayaa laga bilaabay Maarso 24, 2021, Xarunta Dhexe ee STB.
Barnaamijka ayaa lagu wadaa inuu dhaco muddo toddobaad ah.
Wasiirka Dalxiiska ayaa sheegay in kastoo warshaduhu wajahayaan waqtiyo adag, hadana ay jiraan ifafaalo muujinaya soo kabasho joogto ah oo dalxiiskii Seychelles.
Sanadkii labaad oo isku xigta, kulan ay yeesheen Golaha Dalxiiska Seychelles ayaa ku mideeyay warshadaha iyada oo loo marayo barxad farsameed si dib loogu eego waxqabadka meesha loo socdo iyo qorshaha.
Loogu magac daray "Wadada Soo-kabashada" kulanka istiraatiijiyadeed waxaa laga bilaabay Maarso 24, 2021, laga bilaabo Xarunta Dhexe ee STB ee Botanical House, Mt. Fleuri iyadoo ay goobjoog ahaayeen Wasiirka Dalxiiska iyo Arimaha Dibadda, Mudane Sylvestre Radegonde.
Barnaamijka loo qoondeeyay inuu qabsoomo toddobaad ka dib waxaa lagu bilaabay khudbaddii wasiir Radegonde oo ay ku xigtay soo bandhigida istaraatiijiyada ee madaxa fulinta STB, Mrs. Sherin Francis.
Ajandaha la raacayo maalmaha soo socda ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa shirarka wadatashiga suuqa kala duwan ee ay martigelisay Dalxiiska Seychelles Kooxda guddiga ee dibedda iyo sidoo kale waxaa ku jiri doona dood-wadaag ay ka muuqdaan shakhsiyaad kala duwan oo ka hadlaya mustaqbalka warshadaha dalxiiska ee Seychelles iyadoo waddanku isku dayayo inuu ka soo kabto aafada.
Khudbadiisa, ayuu wasiir Radegonde ku sheegay in kasta oo warshaduhu ay wajahayaan waqtiyo adag, ay jiraan astaamo muujinaya soo kabasho joogto ah oo ku timid dalxiiskii Seychelles.
Markaan horay u fiirineyno, waa inaan si isku mid ah u go'aansanaa inaan fiiro gaar ah u yeelano oo aan sii sifeyno qaabka ganacsi ee warshadeena si aan u hubinno in waaritaanku uu yahay qeybta hoose ee warshadahaas. Waa inaanu waxan oo dhan iyo in ka badan ku dadaalnaa sidii aan dib ugu soo ceshan lahayn dalxiiskeenna dalxiis, annaga oo aan wax u dhimayn caafimaadka iyo nabadgelyada dadkeenna, ayay tidhi wasiir Radegonde.